တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. မျက်မှန်သည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating သည် Glass ကို, Glass ကိုအင်္ကျီ, ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:Glass ကိုသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating,glass ကိုအင်္ကျီ,မျက်မှန်သည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating,မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကုတ်အင်္ကျီ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက် > ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် nano Coating
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် nano Coating ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Glass ကိုသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating, glass ကိုအင်္ကျီ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မျက်မှန်သည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဆလိုက်ပွတ်တိုက်မှု Coating 10 ဒီဂရီထောင့်ကိုအောက်တွင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်မှန်အဘို့အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအတှကျကောငျးက Non-hydrophilic ကုတ်အင်္ကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနိမ့်တဲ့ Surface တင်းမာမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အဝါရောင် Transparent AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အရောင်မဲ့ AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းက Surface AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်ချောမွေ့မှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအဘို့အပွန်းပဲ့ Resistance AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆလိုက်ဆန့်ကျင်ပွတ်တိုက်မှု Coating ၏ <10 ° Angle [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating များအတွက်မျက်မှန်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
မျက်မှန်အဘို့အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် non-lipophilic စက်မှုအင်္ကျီ [စက်မှုအင်္ကျီကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအတှကျကောငျးက Non-hydrophilic ကုတ်အင်္ကျီ [ဓာတု Coating သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
အနိမ့်တဲ့ Surface တင်းမာမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှား [ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် Nano Coating] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အဝါရောင် Transparent AF Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating များအတွက်မျက်မှန်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အရောင်မဲ့ AF Coating [ဓာတု Coating သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းက Surface AF Coating [AF-အပေါ်ယံပိုင်းသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်ချောမွေ့မှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating [Anti-လက်ဗွေမူရင်းဖြေရှင်းချက် Specification] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအဘို့အပွန်းပဲ့တော်လှန်ရေးဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့...
တရုတ်နိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် nano Coating ပေးသွင်း
အဆိုပါထုတ်ကုန်ထိုကဲ့သို့သောအမဲဆီ, ရေနံ, ထုံးနှင့် matrix ကိုတွဲလျော့နည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ဖြစ်သောညစ်ညမ်းအမှုန်, အောင်နှင့်လည်းလွယ်ကူလူတွေပွတ်တိုက်အားအေးဂျင့်လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲအပေါ်ယံပိုင်းမျက်နှာပြင်မှဤဖုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘို့အစေနိုငျသော, hydrophobic နှင့်ရေနံ-thinning ဖြစ်ပါသည် ( "လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေး" အကျိုးသက်ရောက်မှု) ။ ကုန်ပစ္စည်း features တွေ: 1. ပြင်းထန်သော hydrophobicity 2. ခိုင်ခံ့ viscous ခုခံဖန်အပေါ်ဖုန်၏ 3. လွယ်ကူဖယ်ရှားရေး, ထုံး။ အခွားသောဂုဏ်သတ္တိများ: 1. Transparent အရည် 2. Wear ခုခံ 3. အဘယ်သူမျှမအပူချိန်ပြောင်းလဲမှု 4. ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး 5. ဓာတုခုခံ
window Glass ကို + အဆောက်အအုံ Glass ကို
မော်တော်ယာဉ် Glass ကို
Glass ကိုသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating glass ကိုအင်္ကျီ မျက်မှန်သည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကုတ်အင်္ကျီ ဖုန်းသည်ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating